फत्तेमानको स्मृतिमा फत्तेमान स्मृति प्रतिष्ठान स्थापना : RajdhaniDaily.com
Homeकलाफत्तेमानको स्मृतिमा फत्तेमान स्मृति प्रतिष्ठान स्थापना
काठमाडौं । दिवंगत गायक फत्तेमान राजभण्डारीको योगदानको चर्चा गर्दै काठमाडौंमा उनको पुण्यतिथि मनाइएको छ । करिब ६ दशक लामो नेपाली संगीत क्षेत्रमा उनको योगदानको स्मरण गर्दै अझ व्यवस्थित बनाई अघि बढाउन बिहीबार फत्तेमान स्मृति प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ ।
अग्रज संगीतकार मिलन मोक्तानको अध्यक्षतामा फत्तेमान स्मृति प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको हो । ‘उहाँले हामीलाई छाडेर जानुभएको सिर्जनालाई व्यवस्थित गर्दै उहाँको योगदानबारे आउँदो पुस्तालाई जानकारी गराउन र नेपाली संगीतको विकासका लागि प्रतिष्ठान गठन गरेका हौं,’ अध्यक्ष मोक्तान भने ।
प्रतिष्ठानको संरक्षकमा गायक फत्तेमानकी पत्नी जमुना राजभण्डारी, दुई छोरा रवीन्द्र राजभण्डारी र जीतेन्द्र राजभण्डारी छन् । यस्तै, कार्यसमितिको अध्यक्षमा मिलन मोक्तान, उपाध्यक्षमा दीपरत्न तुलाधर, भुवन श्रेष्ठ, महासचिवमा रमेश प्रधान, कोषाध्यक्षमा विमल श्रेष्ठ रहेका छन् ।
प्रतिष्ठानको कार्यसमिति सदस्यहरूमा डा. गौरीशंकर मानन्धर, श्याम स्मृत, सुप्रिया श्रेष्ठ, लोमस चापागाईं, सुजाता बर्मा रहेका छन् । प्रतिष्ठानको मानार्थ तथा सल्लाहकार समिति चाँडै गठन गरिने अध्यक्ष मोक्तानले बताए ।
काठमाडौं । सरकारले लक्षित सबै नागरिकलाई खोप लगाउने योजना तयार गरेको र सोहीअनुसार खोप अभियानलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइएको जनाएको छ । खोप अभियान...
काठमाडौं । प्राविधिक दुनियाँमा दशकदेखि सक्रिय सुरेशकुमार राउतले चार सयभन्दा बढी म्युजिक भिडियो सम्पादन गरिसके । यसै सातामात्रै उनीद्वारा तीन भिडियो सम्पादन भए ।...
महामन्त्री कोइरालाले सभापति देउवालाई लेखेको पत्रमा के छ ?
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री डा.शशाङ्क कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई नवलपरासी जिल्ला संगठनको विषयलाई लिएर पत्र लेखेका छन् । महामन्त्री कोइरालाले पार्टीको नवलपरासी...
चेल्सीको खराब प्रदर्शन कायमै
एकैदिन १५३९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ८ जनाको मृत्यु
सोमपालले चितवनको कप्तानी गर्ने